Nainglinn - Page2of 595 - Media and Entertainment
ျပည္တြင္းသတင္း June 17, 2022
တစ္ႏိုင္ငံလုံးအမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္
၂၀၂၂ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ရန္ကုန္က ေအာင္ခ်က္ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိေပမယ့္ သိပၸံဘာသာတြဲ အမွတ္အမ်ားဆုံး ၁၂ ဦးစာရင္းတြင္ ၅ ဦးပါဝင္ ဇြန္လ ၁၇ ၂၀၂၂ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ရန္ကုန္က ေအာင္ခ်က္ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရွိေပမယ့္ သိပၸံဘာသာတြဲ အမွတ္အမ်ားဆုံး ၁၂ ဦးစာရင္းတြင္ ၅ ဦးပါဝင္ေၾကာင္း စာစစ္ဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၂၀၂၂ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ အထက၊ ေလ့က်င့္ေရး (ကမာ႐ြတ္) က…
ၾကားသိရသမွ် June 17, 2022
မိုးမျှော်နေကြလား၊ ယနေ့ည နှင့် မနက်ဖြန် မနက် မိုးကြီးရေလျှံနိုင်တဲ့ ဒေသများ🌧🌧🌧
မုံ႐ြာ ေ႐ႊဘို 🌧🌧🌧🌧ISSUED TIME 16/06/2022 at 6:28PM 16/06/2022 🌧🌧🌧🌧 ယေန႔ည ႏွင့္ မနက္ျဖန္ မနက္ ရွင္ေဗြယန္ မေကာ တႏိုင္း မိုးႀကီးေရလွ်ံႏိုင္ပါတယ္ ISSUED TIME 16/06/2022 at 3:00PM တာပိန္ျမစ္ေရႀကီးေနပါၿပီ ဗန္းေမာ္ ကသာ ေ႐ႊကူ ဧရာဝတီျမစ္ေရမ်ားစြာတိုးလာႏိုင္ပါတယ္ မိုးႀကီးေရလွ်ံ သတိ 🌧🌧🌧 16/06/2022 at 1:30 PM အခ်ိန္မွ…
အေထြအေထြဗဟုသုတ June 16, 2022
အမျိူးသမီးနှစ်ယောက် ပါတီမှာ အရက်ကို လူမှန်းသူမှန်းမသိအောင် မူးနေတဲ့အပြင် (မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ သင့်အားမေ့နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ)
အမျိူးသမီးနှစ်ယောက် ပါတီမှာ အရက်ကိုလူမှန်းသူမှန်းမသိအောင်မူးနေတဲ့အပြင်ပင်လယ်စာတွေကိုလဲ တဝကြီးစားပြီး အိမ်ကိကားမောင်း ပြန်လာတယ်။ #လမ်းခုလတ်ရောက်တော့ …အမျူ ိးသမီးနှစ်ယောက်စလုံးဝမ်းအသဲအသန် သွားချင်ရောတဲ့။ အဲဒါနဲ့ … အနီးဆုံးသချူ င်္ိင်းထဲကိုဝင်အင်းအင်းပါရောtkw။ #သူတို့ပါတဲ့နေရာကလည်း နေ့လည်ကမှမီးသတ်ရဲဘော်တစ်ယောက် သေသွားလို့ မြုပ်ထားတာပန်းခွေတွေရောပန်းခြင်းတွေရောပြေနတာ။ #အဲ့_ပါလည်းပါပြီးရော။အမျူ ိးသမီးနှစ်ယောက်ဒုက္ခရောက်ပါလေရော။ #သူတို့မှာ အင်းအင်းကုန်းစရာဘာမှမရှိဘူးလေ။ ဒေစီဆိုတဲ့အမျူ ိးသမီးကတောအလွယ်တကူပဲ၊ သူ့ရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီနဲ့ကုန်းပစ်တယ်tkw။ #မေရီကတော့သူ့ရဲ့ဘောင်းဘီဟာအသစ်စက်စက်စျေးကြီးပေးဝယ်ထားတယ်ဆိုပြီး ခုနက မီးသတ်ရဲဘော်ရဲ့ပန်းခွေကစာရွက်နဲ့ကုန်းလိုက်ပြီးနှစ်ယောက်သား အသီးသီး အိမ်ပြန်ကျတယ်။ တအောင့်လောက်လဲကြာရော ဒေစီရဲ့ယောက်ျားကမေရီရဲ့ယောက်ျားကို ဖုန်းဆက်တယ်tkw။ “ဟေ့ကောင်ရေ…
အခ်စ္ေရး June 16, 2022
သင့် ချစ်သူ မိန်းကလေး ကို ရင်ခုန်သံ မြန်လာစေမယ့် အကြောင်းအရာတွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲ ? ယခုဖော်ပြမယ့် အချက် (၅) ချက်က အရမ်း Romantic မဆန်ပေမယ့် သင့်ချစ်သူ မိန်းကလေး ဟာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ သင့်ကို နှစ်ဆပိုချစ်လာမှာပါ ၁။ သူမ ကို အမြဲ ကာကွယ်ပေးခြင်းသူမ နဲ့အတူ လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ရုတ်တရက် နေအရမ်းပူလာရင် သင် က ထီးမိုးပေးတာ၊ သူမ…
ၾကားသိရသမွ် June 16, 2022
စက္ေသနတ္ခ်ိန္ၿပီး ထြက္လာသည့္ စစ္ကား(၂)စီးကို ကင္းပုန္းမ်ားၾကားမွ အညာ ပိႏၷဲသီး(၈)လုံးျဖင့္ ဝုန္းႏိုင္ခဲ့ (၂) ဦးလြင့္စင္ၿပီး….(႐ုပ္/သံ)
စက္ေသနတ္ခ်ိန္ၿပီး ထြက္လာသည့္ စစ္ကား(၂)စီးကို ကင္းပုန္းမ်ားၾကားမွ အညာ ပိႏၷဲသီး(၈)လုံးျဖင့္ ဝုန္းႏိုင္ခဲ့၊ (၂) ဦးလြင့္စင္ၿပီး (၃) ဦးထက္မနည္း thay ႏိုင္ဟုဆို ျမင္းမူ၊ ဇြန္ (၁၆)၊ လူငယ့္ေခတ္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ အမွတ္(၃၃)ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္မွ စက္ေသနတ္မ်ားခ်ိန္ကာ ထြက္လာသည့္ ကား(၂) စီးကို ယေန႔ နံနက္ (၁၁) နာရီက ဝုန္းခဲ့သည့္အတြက္ စစ္ေကာင္စီတပ္သား (၃) ဦးထက္မနည္း ေတဆုံးခဲ့းသည္ဟု စစ္ဆင္ေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ခဲ့…
(16.Jun.2022 မှ 22 .Jun. 2022)အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း
16.Jun.2022 မှ 22 .Jun. 2022 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း #တနင်္ဂနွေ ဒီတစ်ပတ်အတွင်း စိတ်ရှုပ်စရာတွေများနေတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိသားစုကိစ္စ ၊အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ စိတ်ရှုပ် စရာတွေပေါ်လာတတ်တာတွေ့ရပါတယ်။ ငွေကြေးဥစ္စာများအမိအဘကျန်းမာရေးအတွက် သုံးစွဲရတတ်ပါ တယ်။ အလုပ်တူ၊ စိတ်ကူးတူတဲ့ သူတွေနဲ့ သဘောထားကွဲလွဲစရာကိစ္စတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ သတိထားရမှာက ဥပဒေနဲ့ မလွတ်ကင်းတဲ့သူ တွေ၊လောင်းကစားအလုပ်တွေလုပ်နေကြသူတွေသတိထားရမဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် သတိထားရမှာက မိုးမိတာမျိုး၊ခြေထောက်အအေးပတ်တာမျိုးတွေကြောင့် ဗိုက်နာတာ၊ဖျားနာ တာတွေ ဖြစ်တတ်သလို၊ ကလေးငယ်များဖြစ်ပါ ကသွေးလွန်တုပ်ကွေးသတိထားရမဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။…
ထိုင်းချဲ 3D Live တိုက်ရိုက် ကြည့်ရန် ရှယ်ထားပါ…
ထိုင်းချဲ 3D Live တိုက်ရိုက် ကြည့်ရန် ရှယ်ထားပါ…. ထီပေါက် ချဲပေါက်ဂါထာတော် ၁။သီဝလီ စ မဟာနာမံ၊ သဗ္ဗလာဘံ ဘဝိဿတိ။ ထေရဿ အနုဘာဝေန၊ သဗ္ဗေ ဟောန္တု ပိယံ မမ။ ၂။သီဝလိ စ မဟာဝီရော ယေ ယေ ပဿန္တု မံ ပိယံ။ တေ တေ ပဿန္တု ပရမံ၊ ဇနပဒါ ပူဇယန္တု။ ၃။သီဝလိ နာမ…
မိမိမှာ စကစ အားပေးသူဖြစ်သော်လည်း သားသမီးတွေက Gen Z ဖြစ်နေတာကြောင့် အိမ်ပေါ်က နှင်ချခံလိုက်ရတဲ့ ငြိမ်းချမ်း
နိုင်ငံကျော် လူရွှင်တော်ငြိမ်းချမ်းကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ကျော်ကြားအောင်မြင်ခဲ့သလို ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ဟာသသရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အဖြစ် ပေါက်ရောက်ခဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။ လူရွှင်တော်ကြီး ငြိမ်းချမ်းဟာ အသက်အရွယ် တစ်ခုရောက်ရှိလာချိန်မှာ အရင်လို အနုပညာအလုပ်တွေ မလုပ်ကိုင် နိုင်တော့ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလမှာ စကစကကျင်းပတဲ့ အငြိမ့်ပွဲမှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေ ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံခဲ့ရသေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ ငြိုငြင်ခြင်းခံရသလို မိသားစုထဲမှာလည်း အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ကြုံနေရတဲ့ ငြိမ်းချမ်းဟာ ကြောင်အိုတော့…
လူတိုင္းမွာ ကိုယ့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရွိပါတယ္။ မိမိကိုဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသလဲ သိခ်င္ရင္ တြက္ၾကည့္ပါ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္စာင့္သလဲ။ လူတိုင္းမွာ ကိုယ့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရွိပါတယ္။ မိမိကို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသလဲသိခ်င္ရင္ တြက္ၾကည့္ပါ။ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ ေစာင့္သလဲ။ လူတိုင္း စိတ္ဝင္စားဆုံးတစ္ခုရွိပါတယ္။ အေရးႀကဳံရင္အားကိုးရွာစၿမဲပါ တခါတရံ အလြန္အမင္း သတၱိရွိပါတယ္ဆိုတဲ့ သူေတြေတာင္အခက္အခဲအက်ပ္အတည္း ႀကဳံေတြ႕လာရင္ အားငယ္ေၾကာက္စိတ္ေတြ ဝင္လာတက္ပါတယ္။ အဲ့လိုအခ်ိန္အခါမ်ိဴးမွာ အားကိုးရွာတက္ပါတယ္။ ဘုရား တရား သံဃာ မိဘ ဆရာ အနေႏၲာအနႏၲငါးပါးအား တိုင္တည္တက္သိမွတ္သမွ် ဂါထာေတြ႐ြတ္ေပါ့။ ဒါနဲ႔အားမရဘူး…
« 123 … 595 »